Degso Battlefield Mobile APK loogu talagalay Android
Degso Battlefield Mobile
Degso Battlefield Mobile,
Battlefield Mobile waa mid ka mid ah sawirada ugu fiican FPS ee lagu ciyaari karo taleefannada Android. Battlefield Mobile, ciyaarta toogashada qofkii ugu horreeyay ee mobilada ee ay soo saartay Farshaxanka elektiroonigga ah, waxaa laga soo dejisan karaa dukaanka Google Play lacag laaan. Diiwaangelinta hore ee Battlefield Mobile, waxaad riixi kartaa badhanka Soo-dejiyaha Mobile-ka ee kor ku xusan, waxaadna noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee ciyaara marka Battlefield Mobile beta soo baxo. Battlefield Mobile APK OBB ayaa lagu dari doonaa beddel ahaan marka ciyaarta la sii daayo.
Ururi kooxdaada oo hoggaamiya weerarka! Taxanaha aagga dagaalka wuxuu ku yaal madal guur -guura oo leh muuqaallo dumin oo muujinaya goobta dagaalka, ciyaar koox sare, dagaalladii FPS!
Ku soo biir Mobile -ka Battlefield. Adiga iyo kooxdaada waxaad ku bilaabi doontaan weeraro khariidado iyo qaabab ay yaqaanaan ciyaartooyda cusub iyo kuwa ruug cadaaga ah. Dhis riig hub dhab ah iyo baabuurta ciyaarta beddelaya. U dagaallama xakamaynta gawaarida xoogga leh sida taangiyada iyo ATV -yada.
Khibrad u yeelo jawiga caanka ah ee goobta dagaalka dhammaan qaababka ciyaarta. Ciyaar kasta waxay noqon doontaa mid aan la iloobi karin, ha ahaato mid ku dul boodaya munaarad duntay adiga oo wata ATV -gaaga, ka soo duulaya dhisme inta aad ridayo gantaal, ama aad cadawgaaga ku aasayso burburka dhisme aad ku burburisay taangigaaga.
Khibrad u yeelo ciyaarta istiraatiijiyadeed ee aan la mid ahayn kuwa kale ee toogtayaasha ah qofkii ugu horreeyay isagoo adeegsanaya khariidad kasta iyo qaab kasta oo la heli karo. Weerarka, Taageerada, Daawada ama Dib -u -celinta, dooro fasalkaaga. Markaa ka farsamee qalabkaaga caadada u ah ururinta ballaaran ee hubka, hargaha, gawaarida u gaarka ah fasalka, iyo inbadan. Hubkaaga ugu awoodda badan waa fasalka iyo qalabka si aad ula jaanqaado playstyle -gaaga shaqsiyeed. Markay tahay waqtigii la dhaqaaqi lahaa, dhulku wuxuu bixiyaa awood istiraatiiji ah oo aan dhammaad lahayn. Lugta ku soco si dhaqso xeeladaysan. Ku amro ATV xawaaraha qarxa iyo waxyaabaha la yaabka leh. Sneak wuxuu ku dilaa hub melee. Ku hoggaami olole naxdin iyo argagax leh taangi gaashaaman oo buuxa. Sanduuqa ciiddu waa xeerarkaaga. Dagaalka dhulka, badda iyo hawada.
La dagaallama kooxdaada geesiyaasha dagaalka oo gacanta ku dhig goobta dagaalka. Ku biir guuto ama samee koox si aad u gasho iska horimaadyo baaxad weyn oo aad ku kasbato abaalmarino. U rogo dagaalka adiga oo raalli ka ah markaad sameyneyso istiraatiijiyad, goaanno kooxeed oo aad horumarineyso guutadaada. Difaac, burburi oo u halganka badbaadada adiga oo leh ciyaar kooxeed iyo ciyaartoy badan, hawlgal iyo in ka badan, qaabab kala duwan oo ciyaarta ah.
Raadi ciyaartaada gaarka ah oo u habee askarigaaga si aad u kordhiso awoodaada. Hubka, aaladaha, hargaha iyo waxyaabo kaloo badan ayaa la habeyn karaa oo la casriyeyn karaa si loo waafajiyo fasalkaaga iyo horumarkaaga. Geesiyaal dagaal oo leh sheekooyin u gaar ah ayaa isu diyaariya dagaal, mid walbana wuxuu leeyahay hadafkiisa. Baro sheekooyinkooda, naftaada geli dagaalka oo ka soo bax goobta dagaalka adiga oo leh habayntii ugu fiicnayd abid. Si kasta oo aad u dagaallanto, xirfadda shaqsiyeed ee sareysa iyo xeeladaha kooxda la dabaqay ayaa kuu horseedi doonta guul.
Goorma Mobile -ka Dagaalku Soo Baxayaa?
Battlefield Mobile, oo ay soo saartay DICE oo leh Alaabada Ciyaarta Warshadaha, ayaa diyaar u ah in laga soo dejiyo Dukaanka Google Play ee ugu horreeya ee Android, loogu talagalay Indonesia iyo Filibiin. Battlefield Mobile ma aha isdiiwaangelin hore, waa tijaabo ciyaarta hore waxaana lagu rakibi karaa taleefannada leh nidaamka hawlgalka Android 7.0. Nooca ciyaarta ugu horreeya waxaa ka mid ah khariidadda Grand Bazaar iyo qaabka ciyaarta Ololaha. Battlefield Mobile waa bilaash inuu ciyaaro wuxuuna u baahan yahay xiriir internet oo firfircoon. Battlefield Mobile waxay lahaan doontaa oo kaliya alaab la isku qurxiyo waxayna lahaan doontaa Baasaboor u gaar ah. Ma jiri doonto wax taageero ah oo ku saabsan ciyaar-is-weydaarsiga qalabka kombuyuutarrada ama PC-ga. In kasta oo aan wax war ah laga soo saarin taariikhda sii -deynta Battlefield Mobile, haddana waxaa la qiyaasayaa in ciyaarta la sii deyn doono 2022 ka dib markii la xaddiday tijaabinta beta -ga waddanka.
Battlefield Mobile Noocyada
Horumar: Electronic Arts